Apple waxay Ingriis ka kireysaa injineer si ay u horumariso Sirdoonka Artificial | Wararka IPhone
Apple waxay Ingriis ka kireysaa injineer si ay u horumariso Sirdoonka Caqliga
Apple waxay sheeganeysay muddo dhowr sano ah in Siri uu isbeddelay, waa horumar aan waligeen arag oo ka muuqda hawlgalka kaaliyaha gaarka ah ee Apple. Si loo wanaajiyo hawlgalkeeda, Apple waxay gacanta ku haysaa gacan-qabashada mashiinka barashada iyo caqliga macmalka ah, laakiin si heerarka isticmaalayaashu aysan awoodin inay "hubiyaan".
Xitaa iyadoo sidaas ah, Apple waxay sii wadaa inay shaqaaleyso shaqaale si loo ballaariyo loona hagaajiyo howlgalka inta badan Siri taasna waxay ku saxiixday Michael Abbott, kaasoo illaa iyo xilligan uu ka mid noqonayo shaqaalaha Apple u shaqeynayay injineer ka tirsan microblogging shabakadda bulshada ee Twitter, laakiin horay uga soo shaqeeyay Palm.
Michael Abbott wuxuu ka shaqeynayay Palm, wuxuu iska kaashanayay horumarinta webOS, nidaam hawlgal oo u adeegay sidii dhiirigelin loogu talagalay iOS. Xagaagii lasoo dhaafay, Abbott wuxuu muujiyay xiisaha uu u qabo shaqada Apple ay ku horumarinayso Sirdoonka Cilmiga Artificial, isaga oo sheegay taas Waxaa laga yaabaa inaad xiiseyneyso inaad bedesho shaqooyinka si ay kaaga caawiso naqshadeynta alaabooyin cusub iyo teknoolojiyad casri ah. Ugu dambeyntiina ragga ka socda Cupertino ayaa u yimid albaabkiisa oo ay la saxiixdeen, in kasta oo ay xaqiiqda tahay in Apple aysan wax caddeyn rasmi ah ka sameyn arrintan, sidii caadada u ahayd.
Michael Abbott wuxuu ku biiray SRI International sanadkii 1990 barnaamijyada barnaamijyada internetka, markii dambe tka shaqee Microsoft oo horseed u ah abuurista kooxihii abuuray madal lagu kaydiyo daruuraha Azure. Markii dambe wuxuu ka shaqeynayay Palm oo ka qeyb qaadanayay abuurista webOS, laakiin wuxuu ka tagay shirkadda markii ay heshay HP. Tan iyo markaas, wuxuu ka shaqeynayay Twitter isagoo ah Madaxweyne Ku-Xigeenka Injineernimada iyada oo ujeedadu tahay hagaajinta kaabayaasha iyo isku halaynta guud ahaan maaddaama ay korodhay sannadihii la soo dhaafay, in kasta oo aysan awoodin inay ku sameyso heerkaas bilow ayuu jeclaan lahaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Apple waxay Ingriis ka kireysaa injineer si ay u horumariso Sirdoonka Caqliga
Apple waxay isu diyaarineysaa inay si heer sare ah ugu xusto Maalinta Haweenka Adduunka
Xanta cusub ayaa sheeganeysa in Samsung ay jareyso tirada OLED-yada ay u sameyso iPhone X